Ukubambisana kwamasu ne-Open Knowledge Maps - AfricArXiv
Ukubambisana kwamasu ne-Open Knowledge Amamephu
Kushicilelwe ngu UJo havemann on I-23rd May 2019 I-23rd May 2019
IVienna, i-Austria neCotonou, eBenin
Amamephu we-Open Knowledge ne-AfricArXiv babambisene ukuqhubekisela phambili i-Open Science kanye ne-Open Access yabaphenyi base-Afrika nakwilizwekazi lase-Afrika.
UPeter Kraker, umsunguli of Vula Ulwazi Lamamephu, uthi:
"Kumamephu Wokwazi Ulwazi, inhloso yethu ukuthi wonke umuntu azuze elwazini lwesayensi, kungakhathalekile ukuthi umsuka nendawo akuyo ikuphi. I-AfricArXiv iyindawo yokufinyelela yamahhala yokuthola ososayensi base-Afrika ukwabelana ngemiphumela yabo yocwaningo kuyo yonke imikhakha yesayensi. Sisebenzisana neAfrikaArxiv ukukhuphula ukubonakala kocwaningo lwase-Afrika futhi sisize ukuvumela ukutholakala kwayo futhi isetshenziswe kabusha ngabacwaningi e-Afrika nasemhlabeni jikelele. "
UJustin Sègbédji Ahinon futhi UJo havemann, abasunguli be -AfricaArxiv, bathi:
“Sibona i-Open Knowledge Maps njengozakwethu oqinile wokuthuthukisa i-Open Science ne-Open Access yabaphenyi base-Afrika kanye nezwekazi lase-Afrika lonke. Silangazelele ukusebenzisana ne-Open Knowledge Maps ezinhlelweni ezihlanganyelwe zokutholakala okusheshayo kokuzuzwa kwabafundi base-Afrika ”
Njengengxenye yohlelo lwabantu abathanda i-Open Knowledge Amamephu, uJustin uzonikeza imihlangano yokutholwa evulekile ngaphakathi kwemiphakathi yasendaweni yaseBeninese kanye nebanzi le-AfricaArXiv ukuqoqa impendulo yokuthi ungahlanganisa kanjani kangcono Amamephu Wolwazi oluvulekile ekusetshenzisweni kwabasebenzisi. Xhumana noJustin ku segbedji@africarxiv.org.
Buka 'I-Afrika' Imephu Yolwazi Ovulekile - Imiphumela yokucinga eyenziwe ngokusekelwe emethadatha namagama asemqoka futhi umakwe nge-'Africa '. Zama futhi useshe amagama athile ngaphakathi kwemephu.
Vula Ulwazi Lamamephu yinhlangano engenzi nzuzo enikelwe ukuthuthukisa ukubonakala kolwazi lwesayensi nomphakathi. Njengengxenye yomsebenzi wayo, i-Open Knowledge Amamephu isebenzisa injini enkulu yokusesha ebonakalayo yocwaningo emhlabeni, eyenza isethi ehlukahlukene yababambiqhaza bakwazi ukuhlola, ukuthola nokusebenzisa okuqukethwe kwesayensi. Ngaphezu kwalokho, i-Open Knowledge Amamephu ithatha ukuqeqeshwa ukuze kuthuthukiswe amakhono okucinga wezincwadi izilaleli ezahlukahlukene. I-Open Knowledge Amamephu yabelana ngayo yonke ikhodi yayo yomthombo, idatha, nokuqukethwe ngaphansi kwelayisense elivulekile, futhi ishicilela obala imephu yayo yomgwaqo nemisebenzi ukwenza amandla wokubamba iqhaza komphakathi ngokubanzi. | Iwebhusayithi: openknowizemaps.org - I-Twitter: @OK_Maps
Tags: UkutholakalaVula Ulwazi Lamamephu
UKhali Allahmagani	· 20th Julayi 2019 ngo-4: 10 pm
Intuthuko eyamukelekile yeziFundo ze-Afrika ukukhulisa ukubonakala kwazo. Ngingathanda ukusebenzisana ne-African ArXiv ekwakheni ukuqwashisa izikhungo zami.
Obanda	· 17th Agasti 2020 ngo-4: 17 ekuseni
Umqondo omuhle. Sicela ufinyelele ku-KiaArXiv at info@africarxiv.org
I-AfricArXiv ngamafuphi - esikwenzayo, impumelelo yethu kanye nohlaka lwethu lomgwaqo - i-AfricArXiv	· 13th Okthoba 2020 ngo-5:19 pm
[…] Ubambiswano ne-Institute for Globally Distributed Open Research and Education (IGDORE), Open Knowledge Map ne-ScienceOpen. I-ORCID ne-AfricArXiv ziqale imizamo yokuhlanganyela ukusiza ososayensi base-Afrika ku- […]
Inselelo Yokutholakala - AfricArXiv	· 22nd Ephreli 2021 ngo 2:24 pm
[…] Funda kabanzi ngokusebenzisana kwethu ne-Open Knowledge Maps ku- https://info.africarxiv.org/strategic-partnership-with-open-knowledge-maps/ [...]